LuckyMetrics: Yakareruka Kubhadharwa Kutsvaga Performance Tracking | Martech Zone
LuckyMetrics: Zvakareruka Kubhadharwa Kutsvaga Kwekuita Kutevera
Chipiri, May 28, 2013 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Pavhareji yako analytics pasuru inogona kukuremedza kana iwe uchingoyedza kuongorora yako yakabhadharwa uye yakabatana yekutsvaga kuita. LuckyMetrics chiri analytics chikuva icho chinobatana neGoogle Adwords, Bing Ads, Clickbank, AWeber, Mailchimp uye PayPal kukupa iwe metric iwe yaunoda kuongorora uye kugadzirisa yako yakabhadharwa yekutsvaga uye yakabatana kushambadzira kuita.
Ndeapi matunhu enzvimbo anobatsira?
Ndeapi maawa ezuva? Mazuva api evhiki?
Ndeapi mazwi akakosha aunofanirwa kurega kubhadharisa, ndeapi aunofanira kukwidza bhidha rako paari?
Ongorora: Isu takasanganisira yedu LuckyMetrics yakabatana chinongedzo mune ino posvo.
Mashandisiro Atinoita Zvekushandisa Zvemagariro muKushanda